पाकिस्थानी पत्रिकाको सनसनीपूर्ण खुलासा: प्रचण्ड भारतसँग बिके – YesKathmandu.com
बुधबार २४, कार्तिक २०७३
पाकिस्तानी मिडियाले पहिलो पटक नेपालको विषयमा आक्रामक सामाग्री प्रकाशन गरेको छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरु भारतसँग लम्पसार गर्ने गरेको भन्दै फिचर प्रकाशित गरेसँगै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि भारतमा विक्ने नेताको सूचीमा थपिएको पाकिस्तानी मिडिया विश्लेषण गरेको छ ।
पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने पत्रिका साउथ एसिया फोरममा फैजान उसामीले प्रचण्डको पछिल्लो सत्तारोहण पनि भारतकै चाहानामा भएको भन्दै लामो फिचर प्रकाशन गरेको हो ।
प्रचण्डले बालुवाटार छिर्ने समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरु कुनै पनि पुरा नभएको र मधेशीहरुको माग बमोजिम संविधान संसोधन हुने सम्भावना तत्काल नभएको भन्दै उक्त पत्रिकामा संविधान संसोधन नगरी भारतलाई विश्वासमा लिन समेत प्रचण्ड असफल हुने उल्लेख छ ।
यो पत्रिकामा नेपाल नाममा लेखिएको फिचरले पाकिस्तानमा भारतले नेपाललाई निरिह बनाएर राखेको भन्ने बुझाइ पाकिस्तानमा ब्याप्त रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
One thought on “पाकिस्थानी पत्रिकाको सनसनीपूर्ण खुलासा: प्रचण्ड भारतसँग बिके”
Surya nepal says:
पाकिस्तानी मिडियाको विश्लेषणमा सत्यता छ । हामीले अनुहार हेर्न ग्लासको सरण लिनुपर्नेहुन्छ । राजनीतिमा ग्लास दुनीयाको विष्लेशण हुन आऊछ । प्रचन्ड भनेका ढोंगी , दलाल , पाखन्डी , वेघर्मी पतीत मान्छेको नामहो भन्दा आपत्ती हुदैन । ऊन्का हरेक शव्द र व्यवहारलाई विश्लेषण गर्नेहो भने ऊनी तैरिन्छन् , र नेपालको भविष्य सांघुरो छिडीमा घुसाएको प्रष्ट हुन्छ ! ऊनको राजनीति जीवन त सकियोनै ! मुलुकलाई वर्वादी गरेर मात्र थकाई मार्ने ऊन्को लक्षण देखिन्छ ! जसरी प्रजातन्त्रको नाममा गिरिजावावुले मुलुकलाई सांघुरो छिडि माओवादीको एजेन्डामा छिराएर पौने तिनकरोड नेपालीको भविष्य र भाग्यमा पोतेका थिए ! त्यो भन्दा ऊच्च दर्जाको शिखन्डी प्रचन्ड भएर ऊदाए । ?????????
जनकपुरमा झडप हुँदा मधेसी मोर्चाका २० भन्दा बढि कार्यकर्ता घाइते
बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारीद्वारा दुईवटा मोटरसाइकलमा आगजनी
चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल भ्रमणमा
एमालेबाट आठ महिला प्रमुखको उम्मेदवार
प्रदेश नं. २ मा मिश्रित परिणाम, अग्रस्थानमा कांग्रेस नै
१ हजार सहयोग गर्न लाग्दा १ लाख ४७ हजार लुटियो